Uninstall SHAREit ugbu a, ngwa nwere isi ọma | Gam akporosis
I kwesiri ime gaa wepu ngwa a na-akpọ SHAREit nke ahụ nwekwara ihe karịrị nde nbudata 1.000. Ọ bụ n'ihi na ọ nwere ike ibute koodu ọjọọ na mgbakwunye na omume ndị ọzọ na-adịchaghị mma maka ebumnuche anyị.
Nke kacha njọ bụ na Achọpụtala nsogbu a ọnwa atọ gara aga ọ bụkwa ndị mmepe ahụ nwetara ozi a. Ruo ugbu a ọ nweghị ihe ha mere.
SHAREit si vulnerability dabere na ngwa ọ bụla dakọtara na ya nwere ike remotely igbu koodu, ebe ọ ga-ekwe omume ịgụ na ide site na otu ngwa ahụ.
E wezụga nke ahụ kwa na-enyere gị aka ịnata ntuziaka iji budata APK site na ebe nrụọrụ weebụ a kwadoro nke ọma na URL nwere koodu. Kasị mma, lee ihe nchọgharị Chrome gosipụtara ike ya site na igbochi ịnweta URL ndị ahụ.
N'aka ozo, ichikota anyi puru ikwu na a ngwa nwere ike ịbụ na ọdụ ụgbọ mmiri nke ntinye ka anyị mobile n'ime a na-adịghị ike otu, ọ bụ ezie na onye ọrụ ga-eme ihe maka ụfọdụ ọrụ ụfọdụ akọwapụtara nke gụnyere APKs, na ndị ọzọ.
Ihe ọchị banyere ya bụ na SHAREit bụbu akụkụ nke Lenovo, ya mere ọ nwere ike ịbụ akụkụ nke ngwa ndị ahụ na-arụkarị ụlọ nrụpụta na otu ụdị ngwaọrụ. Ee ee, ozi ahụ eruola anyị aka n’ihi n’ikpeazụ ndị mmepe ahụ emeghị ihe ọ bụla ma nwekwaa nhọrọ karịa imepe onwe ha n’ihu ọha ka e wee nwee ike ịme mkpebi nwere ike iwepu ngwa a raara nye ịkekọrịta faịlụ na mpaghara.
N'eziokwu gburugburu akụkụ ndị a ka dị maka nbudata, yabụ ọ bụrụ na ị nwere ya ma ọ bụ mara onye na-eji ya, wepụ ya ozugbo.
Ozi ndị ọzọ - Microtrends
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nwere ike iwepu ngwa SHAREit ugbu a, enweghị nchebe
Usoro Huawei P50 ga-abata na izu ikpeazụ nke Machị: Ọ ga-agụnye ekwentị atọ